“Jereo Tsara ny Voro-manidina”—Matio 6:26
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Norvezianina Ourdou Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
EFA nandinika vorona ve ianao? Hita hatraiza hatraiza mantsy izy ireny sady anisan’ny zavaboary mora dinihina indrindra. Samy hafa ny lokony, endriny, feony, ary ny fombafombany, ka mahafinaritra sy mahatsikaiky erỳ ny mijery azy. Afaka andro mihitsy ianao rehefa mandinika azy ireny.
Indraindray aza ianao eo am-baravarankely fotsiny dia efa mahatazana karazam-borona: Io fa misy soisoy mihady kankana. Iny koa misy sidintsidina mitady bibikely hohanina. Tsy sasatra mihitsy ilay tsipoy manamboatra ny akaniny. Sahirana kosa ny tsikirity mamahana an’ireo zanany kely mifandrombaka sakafo. Ary jereo ilay domohina lahy fa miedinedina erỳ satria te hambabo ny vavy!
Mahavariana ny vorona sasany, toy ny voromahery sy ny hitsikitsika ary ny firasa, rehefa misidina eny amin’ny lanitra. Misy kosa tena mampihomehy, toy ny fody mitsindroka poti-mofo. Eo koa ny voromailala miezaka erỳ manabontsina ny tratrany, satria toa tsy taitra aminy mihitsy ilay vavy. Indraindray koa mankeny ambony tariby mihetsiketsika ireo boloky mavokely sy volondavenona, nefa mitady hianjera ka lasa mitsingoloka eny ambony eny, sady misiotsioka ihany. Misy indray vorona somary manaitra rehefa mirohotra hifindra monina, toy ny vano isan-karazany. Efa an’arivony taona no nisy nandinika ireny vorona mpifindra monina ireny, ka hita fa afaka mandeha lavitra be izy ireo sady mitovy foana ny fotoana iaingany sy ahatongavany. Nilaza mihitsy ny Mpamorona hoe: “Ny vanobe eny amin’ny lanitra aza mahalala tsara ny fotoana voatondro. Ary samy manaja tsara ny fotoana fahatongavany ny domohina sy ny sidintsidina ary ny tsikorovana.”—Jeremia 8:7.
Miresaka vorona koa ny Baiboly
Matetika ny Baiboly no miresaka momba ny vorona, mba handraisantsika lesona. Tena mahery mandeha, ohatra, ny aotirisy ka hoy Andriamanitra tamin’i Joba: “Rehefa akopakopany ambony ny elany, dia ihomehezany fotsiny ny soavaly sy ny mpitaingina azy.” * (Joba 39:13, 18) Nanontany koa izy hoe: ‘Noho ny fahiratan-tsainao ve no isidinan’ny hitsikitsika lehibe? Sa noho ny baikonao no isidinan’ny voromahery?’ (Joba 39:26, 27) Inona no lesona avy amin’izany? Mila manaiky ny fahendren’Andriamanitra isika, satria tsy avy amintsika mihitsy ny fahaizan’ny vorona.
Nanoratra momba ny “feon’ny domohina” i Solomona Mpanjaka, satria izany no amantarana fa tonga ny lohataona. (Tononkiran’i Solomona 2:12) Niresaka vorona koa ny mpanao salamo. Te hanompo tao amin’ny tempoly mantsy izy ka nialona kely an’ireo vorona nisidintsidina tao. Hoy izy: ‘Na ny vorona aza nahita trano, ary ny sidintsidina nahita akany hametrahany ny zanany, dia eo amin’ny alitaranao be voninahitra, Jehovah ô!’—Salamo 84:1-3.
“Ny Rainareo izay any an-danitra manome sakafo azy. Tsy sarobidy noho ireny ve ianareo?”—Matio 6:26
I Jesosy Kristy no tena niresaka hevitra mahafinaritra be momba ny vorona. Hoy izy, araka ny Matio 6:26: “Jereo tsara ny voro-manidina: Tsy mba mamafy na mijinja na manangona ho ao an-trano fitehirizam-bokatra ireny, nefa ny Rainareo izay any an-danitra manome sakafo azy. Tsy sarobidy noho ireny ve ianareo?” Tena manohina ny fo izany, sady manome toky hoe sarobidy amin’Andriamanitra isika. Tsy tokony hanahy àry isika, satria hanome izay ilaintsika eo amin’ny fiainana izy.—Matio 6:31-33.
Mbola be dia be ankehitriny no tia mandinika vorona, ka sondriana erỳ amin’ny hakantony, ny siokany, ny sangisanginy, ary ny fihetsiketsehany rehefa hitady vady. Afaka mandray lesona amin’izy ireny koa isika. Tianao àry ve ny mba “hijery tsara ny voro-manidina?”
^ feh. 6 Ny aotirisy no vorona lehibe indrindra mbola misy hatramin’izao. Izy koa no mahery mandeha indrindra, satria mahatratra 72 kilaometatra isan’ora ny hafainganam-pandehany raha lalana akaikikaiky.
Tianao ho Tamana ao An-jaridainanao ve ny Vorona?
Asio an’ireto ao, satria ireto no tadiaviny:
Fialofana Hazo na zavamaniry mandrobona azony ipetrapetrahana na anadiovana ny volony.
Sakafo Zavamaniry isan-karazany, izay fihinan’ny vorona eo an-toerana. Tsara koa raha misy vilia kely fasiana ny sakafony.
Rano Matetika ny vorona no misotro rano, sady tia mandro ny ankamaroany.
Akany Hazo, zavamaniry mandrobona, na tranom-borona namboarina, izay tena tian’ireo vorona an’ala.
Hitantsika avy amin’ny toetoetran’ny vorona fa mahay mamorona Andriamanitra. Hitantsika avy amin’izany koa fa tena ilaina ny mifantoka amin’izay zava-dehibe kokoa.